Filtrer les éléments par date : vendredi, 18 août 2017
vendredi, 18 août 2017 20:57
Nigadona io tolakandro io eto Antsiranana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nanao fanamiana miaramila fitondra an'ady izy tamin'ny fahatongavany, tranga izay nanaitra ny olona ka nahatonga ny maro mametra-panontaniana hoe: tonga hitandroka an'i Marc Ravalomanana taorin'ilay ady hotely hipetrahana omaly sa inona no anton'io fanamiana miaramila io ?
Amin'ny maha filoha faratampon'ny foloalindahy ny filoham-pirenena no voalaza fa ananany zo manao fanamiana miaramila toy izao, ary vao avy niatrika fanazarantena miaramila tao Tampoketsa Ankazobe izy no niazo avy hatrany an'Antsiranana hanatrika ny fankalazana ny jobily faha-50 taonan'ny FJKM sy ny faha-200 taona nidiran'ny misiona LMS (Lodon Missionary Society) teto Madagasikara, tsy nisy fotoana nanoloana akanjo sa niniana nanaovana?
vendredi, 18 août 2017 12:58
Alakamisy Itenina: Enterrement Andry Ratovo
Andry Ratovo, Rédacteur en Chef de la Sobika a tiré sa révérence, il a été enterré dans son caveau familial à Alakamisy Itenina Fianarantsoa ce mercredi 16 août 2017.
Un grand Merci à tous de la part de la Famille et de la Rédaction Sobika.
Voalevina tany Alakamisy Itenina ny alarobia 16 aogositra 2017 i Andry Ratovo, Tonian'ny Fanoratana eto amin'ny Sobika.
Manolotra ny fisaorana ho an'ny rehetra ny Fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Sobika.
vendredi, 18 août 2017 12:03
Antsalova: Mitaraina ireo mpampiasa finday
Tena sahirana ireo mpanjifa aty an-toerana raha sendra hanolo “puce” very na hamerina laharana finday na hanao “récupération SIM” satria tsy misy afaka manao izany aty fa tsy maintsy mandeha any Maintirano, nefa iaraha-mahalala fa 120 km ny elanelan-tany ary lafo be ny sarandalana noho ny haratsian'ny lalana.
Amin’izao maintany izao dia 4 alina Ariary ny sarandalana mihatra. Raha hanao “récupération” laharana iray fotsiny no anton-diananao any Maintirano dia lany 8 alina Ariary ianao sarandalana fotsiny, ary mbola etsy andanin'izany ny sakafo sy saran'ny hotely fatoriana.
Misedra izany olana izany avokoa na mpanjifan’ny Telma, Orange ary Airtel.
vendredi, 18 août 2017 11:45
Inde: Fampirantiana Vakoka sy Kolotsaina
Ny Masoivohon'ny Inde dia mikarakara, miaraka amin'ny ministeran’ny kolontsaina ny asa tanana ary ny vakoka fampirantina an-tsary izay mitondra ny lohahevitra hoe "Culture Pluraliste de l’Inde Harmonie dans la diversité" izay atao ao amin’ny Tranombokim-pirenena efitrano Gisele RABESAHALA nanomboka omaly 17 ka tsy hatramin'ny 22 aogositra2017 ho avy izao.
Manasa ny rehetra izy ireo amin'izany hifankahalalana bebe kokoa ara-kolotsaina.
Tsy misy ny vidim-pidirana.
vendredi, 18 août 2017 11:20
Lalao Tennis: Fiomananana amin'ny lalao famaranana
Amin’ny Alahady izao ny lalao famaranana ho an’ny taranja Tennis Championnat de Mada izay tontosaina eny amin’ny ACSA Ambohidahy.
Ny fifanitsanana moa dia mbola mitohy hatrany.
vendredi, 18 août 2017 11:16
Mahajanga: Raikitra ny Sport scolaire nasionaly andiany faha-24
Tanterahina eto an-drenivohitr'i Boeny manomboka anio 18 ka hatramin'ny 27 aogositra ny fiadiana ny tompondaka nasionaly ny fanatanjahantena an-tsekoly. Andiany faha-24 ity, ka eo amin'ny Kianja Rabemananjara no hanaovana ny lalao amin'izany.
vendredi, 18 août 2017 11:12
RN7 Ambohimahasoa: Taxi-brousse voatafika, voaroba avokoa ny mapndeha
Taxi-brousse iray mampitohy an'Antananarivo amin'i Manakara no nisy nanafika io maraina io, tao amin'ny toerana 30km niala an'i Camp Robin akaiky Ambohimahasoa.
Lasa daholo ny entan'ny mpandeha sy ny finday rehetra. Tsy nisy kosa ny aina nafoy.
vendredi, 18 août 2017 08:19
Fianarantsoa: Tovolahy mpianatra nifindra monina tratra nangalatra
Tra-tehaky ny fokonolona teo am-pangalarana panneau solaire ny tovolahy mpianatra mipetraka irery ao Beravina Avaratra, Fokontany Talatamaty, Fianarantsoa.
Ny alin'ny alakamisy hifoha zoma ity no nitrangan'izany tokony ho tamin'ny 12 ora alina. Nihetsika ny andrimasom-pokonolona rehefa nanao koka na niantso vonjy ny tompontrano. Nisy ny savahao nanamborana ny mpangalatra.
Nahomby izany saingy tsy teny aminy intsony ny panneau solaire ka nasaina nalainy izany mba tsy hitaran'ny hatezeran'ny olona.
Naka izany am-pilaminana ity mpangalatra ary dia niandry ny maraina ny rehetra mba hanaovana ny tandrifin'andraikitra rehetra.
Tsy nikasi-tanana azy ireo mponina manodidina fa nanaiky ny fandaminana.